ကိုယျခန်ဓာမှာ သှေးကွောတှေ ပျေါလာရတဲ့ အကွောငျးအရငျး (၅) ခကျြ - ONE DAILY MEDIA
ကိုယျခန်ဓာမှာ သှေးကွောတှေ ပျေါလာရတဲ့ အကွောငျးအရငျး (၅) ခကျြ
သှေးပွနျကွောတှကေ ခန်ဓာကိုယျထဲက သှေးတှကေို နှလုံးဆီသို့ ပို့ဆောငျပေးတဲ့ အရေးကွီးတဲ့ အရာပါပဲ။ ခန်ဓာကိုယျမှာ သှေးကွောတှေ ပျေါလာတာကို လူအမြားစုက သိပျပွီး မစဉျးစားမိကွပါဘူး။ ထငျထငျရှားရှား ပျေါလှငျနတေဲ့ သှေးကွောတှကေ သငျ့ရဲ့ ကနျြးမာရေးကို ပွောပွပေးနိုငျပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျမှာ သှေးကွောတှေ ပျေါလာတာက ကနျြးမာရေးအတှကျ အရမျးအန်တရာယျ မရှိပါဘူး။
1. သှေးကွောတှကေို မွငျနရေတာက အသားအရေ ပုံစံနဲ့လညျး သကျဆိုငျပါတယျ။
အသားလတျတဲ့ သူတှမှော သှေးကွောတှကေို ပိုပွီးမွငျတှနေို့ငျ ပါတယျ။ အရပွေားပါးတဲ့ သူတှေ ဆီမှာလညျး သှေးကွောတှေ ပျေါနတော မွငျရမှာပါ။ အသကျအရှယျ ကွီးလာတဲ့ အခါ အရပွေားအောကျက အဆီလှာက ပိုပွီး ပါးပါးလာ ပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အသကျအရှယျ ကွီးတဲ့ သူတှရေဲ့ လကျ၊ ခွထေောကျနဲ့ အခွားခန်ဓာကိုယျ အစိတျအပိုငျးတှမှော သှေးကွောတှကေို မွငျနရေ တာပါ။ ဒါ့အပွငျ သှေးကွောတှကေ အရပွေားနဲ့ နီးနီးကပျကပျ ရှိနရေငျလညျး သှေးကွောတှကေို မွငျရ မှာပါ။
2. လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျတဲ့ အခြိနျမှာလညျး သှေးကွောတှကေို ထငျထငျ ရှားရှား မွငျရတတျပါတယျ။
ခန်ဓာကိုယျ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျတဲ့ အခါ ကွှကျသားတှကေလညျး အလုပျလုပျပွီး စူထှကျလာ ပါတယျ။အဲဒီနောကျ ကွှကျသားတှကေ သှေးကွောတှကေို အရပွေားမကျြနှာပွငျ ဆီကို တှနျးပို့ပေး ပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပွီးတဲ့ အခါ ခန်ဓာကိုယျမှာ သှေးကွောတှကေို မွငျနရေ တာပါ။
3. အမြိုးသမီးတှမှော ဆိုရငျ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ သှေးကွောတှေ ထငျရှားနတေတျ ပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ မကျြနှာမှာလညျး သှေးကွောတှကေို မွငျရတတျ ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စိုးရိမျစရာ မရှိပါဘူး။ ကိုယျဝနျဆောငျ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ သှေးပမာဏက ကိုယျဝနျဆောငျ မဟုတျတဲ့ အမြိုးသမီးတှေ ထကျ ပိုမြားလို့ပါ။ သှေးပမာဏ မြားလာတဲ့ အခါ သှေးကွောတှေ ပျေါလာပါတယျ။ တိုးလာတဲ့ သှေးပမာဏတှကေို သန်ဓသေားဆီ ရောကျအောငျ ပို့ဖို့အတှကျ သှေးကွောလေးတှကေ အလုပျ ပိုလုပျရ ပါတယျ။ သှေးကွောတှကေ ကလေးမှေးဖှားပွီးတဲ့ အခါမှာတော့ ပြောကျသှားမှာပါ။
4. ခန်ဓာကိုယျမှာ အဆီနညျးတဲ့ အခါမှာလညျး သှေးကွောတှေ ထငျရှားနတေတျ ပါတယျ။
ပိနျတဲ့သူတှမှော အရပွေားအောကျက အဆီလှာ ကလညျး ပါးတာကွောငျ့ သှေးကွောတှကေို မွငျနရေတတျပါတယျ။ ပါးလှာတဲ့ အဆီလှာက သှေးကွောတှကေို အပွညျ့အဝ ဖုံးလှမျးမထားနိုငျ လို့ပါ။
5. သှေးကွောတှေ အလှနျ ထငျရှားလာတယျ ဆိုရငျ ဆရာဝနျဆီ သှားပွသငျ့ပါတယျ။
အထကျမှာ ဖျောပွခဲ့တဲ့ အခကျြတှကေ စိတျပူစရာမလိုဘဲ သာမနျဘဲ ဖွဈပါတယျ။ ရငျဘတျအောငျ့ခွငျး၊ အသကျရှူမဝခွငျး၊ သှေးပွနျကွောနားမှာ ပွညျတညျခွငျး၊ သှေးကွောရောငျခွငျးစတဲ့ လက်ခဏာတှနေဲ့ အတူ သှေးကွောတှေ အလှနျ ထငျရှားလာခဲ့ရငျ ဆရာဝနျဆီ သှားပွသငျ့ ပါတယျ။ ဒီရောဂါလက်ခဏာတှကေ သှေးကွောထုံးခွငျး၊ သှေးကွောပိတျခွငျး၊ သှေးပွနျကွောနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ ရောဂါတှရေဲ့ လက်ခဏာ ဖွဈတာကွောငျ့ ဂရုမစိုကျဘဲ မနသေငျ့ ပါဘူး။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ သွေးကြောတွေ ပေါ်လာရတဲ့ အကြောင်းရင်း (၅) ချက်
သွေးပြန်ကြောတွေက ခန္ဓာကိုယ်ထဲက သွေးတွေကို နှလုံးဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အရာပါပဲ။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ သွေးကြောတွေ ပေါ်လာတာကို လူအများစုက သိပ်ပြီး မစဉ်းစားမိကြ ပါဘူး။ ထင်ထင်ရှားရှား ပေါ်လွင်နေတဲ့ သွေးကြောတွေက သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ပြောပြပေးနိုင် ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ သွေးကြောတွေ ပေါ်လာတာက ကျန်းမာရေးအတွက် အရမ်းအန္တရာယ် မရှိပါဘူး။
1. သွေးကြောတွေကို မြင်နေရတာက အသားအရေ ပုံစံနဲ့လည်း သက်ဆိုင်ပါတယ်။
အသားလတ်တဲ့ သူတွေမှာ သွေးကြောတွေကို ပိုပြီးမြင်တွေ့နိုင် ပါတယ်။ အရေပြားပါးတဲ့ သူတွေ ဆီမှာလည်း သွေးကြောတွေ ပေါ်နေတာ မြင်ရမှာပါ။ အသက်အရွယ် ကြီးလာတဲ့ အခါ အရေပြားအောက်က အဆီလွှာက ပိုပြီး ပါးပါးလာ ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အသက်အရွယ် ကြီးတဲ့ သူတွေရဲ့ လက်၊ ခြေထောက်နဲ့ အခြားခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ သွေးကြောတွေကို မြင်နေရ တာပါ။ ဒါ့အပြင် သွေးကြောတွေက အရေပြားနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် ရှိနေရင်လည်း သွေးကြောတွေကို မြင်ရ မှာပါ။
2. လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တဲ့ အချိန်မှာလည်း သွေးကြောတွေကို ထင်ထင် ရှားရှား မြင်ရတတ် ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တဲ့ အခါ ကြွက်သားတွေကလည်း အလုပ်လုပ်ပြီး စူထွက်လာ ပါတယ်။အဲဒီနောက် ကြွက်သားတွေက သွေးကြောတွေကို အရေပြားမျက်နှာပြင် ဆီကို တွန်းပို့ပေး ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတဲ့ အခါ ခန္ဓာကိုယ်မှာ သွေးကြောတွေကို မြင်နေရ တာပါ။
3. အမျိုးသမီးတွေမှာ ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ သွေးကြောတွေ ထင်ရှားနေတတ် ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ မျက်နှာမှာလည်း သွေးကြောတွေကို မြင်ရတတ် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိုးရိမ်စရာ မရှိပါဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ သွေးပမာဏက ကိုယ်ဝန်ဆောင် မဟုတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ထက် ပိုများလို့ပါ။ သွေးပမာဏ များလာတဲ့ အခါ သွေးကြောတွေ ပေါ်လာပါတယ်။ တိုးလာတဲ့ သွေးပမာဏတွေကို သန္ဓေသားဆီ ရောက်အောင် ပို့ဖို့အတွက် သွေးကြောလေးတွေက အလုပ် ပိုလုပ်ရ ပါတယ်။ သွေးကြောတွေက ကလေးမွေးဖွားပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ ပျောက်သွားမှာပါ။
4. ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆီနည်းတဲ့ အခါမှာလည်း သွေးကြောတွေ ထင်ရှားနေတတ် ပါတယ်။
ပိန်တဲ့သူတွေမှာ အရေပြားအောက်က အဆီလွှာ ကလည်း ပါးတာကြောင့် သွေးကြောတွေကို မြင်နေရတတ်ပါတယ်။ ပါးလွှာတဲ့ အဆီလွှာက သွေးကြောတွေကို အပြည့်အဝ ဖုံးလွှမ်းမထားနိုင် လို့ပါ။
5. သွေးကြောတွေ အလွန် ထင်ရှားလာတယ် ဆိုရင် ဆရာဝန်ဆီသွားပြသင့်ပါတယ်။
အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေက စိတ်ပူစရာမလိုဘဲ သာမန်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ အသက်ရှူမဝခြင်း၊ သွေးပြန်ကြောနားမှာ ပြည်တည်ခြင်း၊ သွေးကြောရောင်ခြင်းစတဲ့ လက္ခဏာတွေနဲ့ အတူ သွေးကြောတွေ အလွန် ထင်ရှားလာခဲ့ရင် ဆရာဝန်ဆီ သွားပြသင့် ပါတယ်။ ဒီရောဂါလက္ခဏာတွေက သွေးကြောထုံးခြင်း၊ သွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ သွေးပြန်ကြောနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ရောဂါတွေရဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်တာကြောင့် ဂရုမစိုက်ဘဲ မနေသင့် ပါဘူး။
သှေးတိုးခွငျးကို ၁၀ မိနဈအတှငျး သကျသာသှားစမေယျ့ အလှယျကူဆုံး နညျးလမျးမြား
ငါးကွီးဆီနစေ့ဉျစားသုံးခွငျး၏ အကြိုးကြေးဇူး (၁၀) ခု
ယခငျခတျေမှ အဖိုးအဖှားတို့၏ အမိုကျစား ဓာတျပုံ (၃၀) ပုံ
သငျ့စမတျဖုနျးကို ရရှေညျခံအောငျ အသုံးပွုပုံ ပွုနညျး (၁၀) ခကျြ
ယခငျခတျေမှစကာ ယနတေို့ငျ အမြိုးသမီးမြားလုပျခဲ့ကွတဲ့ အလှအပအတှကျရူးသှပျမှု(14) ခု
Papakolea Beach, a.k.a. Green Sand Beach, gets its distinctive coloring from chrysolite,amineral of volcanic origin that’s also used in jewelry
Oct 26, 2021 One Daily Media